အလယ်အလတ် Ballet Pointe ဖိနပ်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်စက်ရုံ - Fitdance ဘဲလေးစက်ရုံ။
နေအိမ် > Dance ဖိနပ် Dance ဖိနပ် > အလယ်အလတ်ဘဲလေးပွင့်ဖိနပ်
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး wear ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အကအ ၀ တ်အထည်ရောင်းချမှုအထူးပြုသည့်တရုတ်အကဖျော်ဖြေရေးဖျော်ဖြေရေးစက်ရုံတွင်အောင်မြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာဘဲလေး tutu၊ ဘဲလေးအ ၀ တ်အစား၊ ဘဲလေး၊ အက၊ အခြားအကအခုန်ဝတ်။ နှင့်ဘဲလေးဖိနပ်, ဘဲလေးတင်းနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံရပ်ခြားမြောက်အမေရိက၊ ရုရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားစသည့်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများသို့တင်ပို့သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များကကောင်းစွာလက်ခံကြသည်။ Guangdong နှင့် Hubei တွင်ထုတ်လုပ်မှုစခန်း ၂ ခုရှိသည်။ ၀ န်ထမ်း ၂၀၀ တွင် ၀ န်ထမ်း ၂၀၀ ရှိသည်။ အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနာများ၊ မန်နေဂျာများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကမြင့်မားသောသမာဓိရှိခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုအာမခံပေးနိုင်သည်။
ပစ္စည်း1. Elastic တီးထည်ကိုခြေထောက်အတွက်အသုံးပြုသည်, ၂။ ဖိနပ်ခြေထောက်တွင်ရေမြှုပ်ပါသောဖိအားကိုတိတ်ဆိတ်ပြီးစုပ်ယူနိုင်သည်။
1. Elastic တီးထည်ကိုခြေထောက်အတွက်အသုံးပြုသည်,
Hot Tags: အလယ်အလတ်ဘဲလေးပွင့်ဖိနပ်၊ ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများ၊ တရုတ်စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အရည်အသွေးမြင့်၊